Vaovao - Ny antony mahatonga ny hovitrovitra sy ny tabataban'ny rafitra hydraulic sy ny fepetra fanafoanana azy ireo
Betsaka ny loharanon'ny fihoaram-pahefana sy ny tabataba ao amin'ny rafitra hydraulic, ao anatin'izany ny rafitra mekanika, paompy hydraulic, valves hydraulic ary pipelines. Fanetsehana sy tabataban'ny rafitra mekanika Ny fihozongozona sy ny tabataban'ny rafitra mekanika dia vokatry ny rafitra fampitana mekanika izay mitondra ny paompy hydraulic, indrindra amin'ireo lafiny manaraka.
1. Ny tsy fandanjalanjan'ny vatana mihodina amin'ny fampiharana azo ampiharina, ny ankamaroan'ny motera dia mitondra ny paompy hydraulic amin'ny alàlan'ny fitambarana. Sarotra be ny manao ireo vatana mihodina ireo handanjalanja tanteraka. Raha lehibe loatra ny hery tsy mahay mandanjalanja, dia hihodina izy rehefa mampisy hovitrovitra mafy amin'ny hazo mihodina sy miteraka tabataba.
2. Fametrahana tsy mety Ny rafitra hydraulic matetika dia miteraka hovitrovitra sy tabataba noho ny olana napetraka. Toy ny tsy fahampian'ny fantsom-pantsakana sy ny lesoka amin'ny fototr'aretina, na ny paompy hydraulic sy ny motera dia tsy mifangaro, ary malalaka ny fitambarana, izany dia hiteraka fikororohana sy tabataba lehibe kokoa.
3. Rehefa miasa ny paompy hydraulic, raha toa ka lehibe loatra ny fanoherana ny fantsom-panafody solika hydraulic, amin'izao fotoana izao, tara loatra ny menaka hydraulic mba hamenoana ny lavaka fantsonan'ny solika ao anaty paompy, ka miteraka fantsona ampahany amin'ilay fitrohana menaka. lavaka ary mamorona tsindry ratsy. Raha mahatratra ny rivotra misy solika fotsiny ity tsindry ity rehefa tafasaraka ny tsindry, ny rivotra efa levona tao anaty menaka tany am-boalohany dia hotazomina be dia be ary hamorona fehin-drivotra malalaka. Rehefa mihodina ny paompy dia afindra ao amin'ny faritra misy tsindry mafy ity menaka misy mibontsina rivotra ity ary ateraky ny tsindry mafy ny fipoahan'ny rivotra. Mihena, manapaha ary manjavona, mamorona fihoaram-pahefana avo eo an-toerana avo
Ny fomba manokana dia:
1. Ny fantson-tsofina mitsentsitra ny paompy dia tokony hasiana tombo-kase mafy hisorohana ny fidiran'ny rivotra;
2. Mamolavola araka ny antonony ny fitoeran-tsolika. Ny fisorohana ny cavitation amin'ny valves hydraulic dia natao indrindra mba hampihenana ny fanoherana ny fantsona. Ny fepetra mahazatra ampiasaina dia misy ny fampiasana fantsom-pitrohana savaivony lehibe kokoa, sivana suction lehibe azo ampiasaina ary miaraka amin'izay koa hialana amin'ny fanakanana ny sivana solika; ny haavon'ny savony dia tokony ho kely araka izay tratra.
3. Sakano ny famolavolana fikorontanana sy ny fihodinan'ny fantsona. Rehefa manamboatra ny fantsom-pifaneraserana amin'ny rafitra hydraulic, ny fizarana fantsona dia tokony hiezaka ny hisoroka ny fanitarana tampoka na ny fihenan-tsasatra; raha fantsona voahenjana no ampiasaina dia tokony ho mihoatra ny in-dimy ny savaivon'ny savony ny savaivony. Ireo fepetra roa ireo dia afaka misoroka tsara ny fitroarana sy ny fihodinan'ny fantsona.
Ireo singa momba ny herinaratra dia ampiasaina indrindra hanomezana angovo ireo mpikatroka, paompy hydraulic indrindra. Rehefa avy namaky ny fitaovana fanaraha-maso sy fanitsiana (valves hydraulic isan-karazany) ho an'ny actuators ny ranon-tsolika dia afaka mamita hetsika sasantsasany ny mpikatroka, toy ny varingarina hydraulic. Fanodinana motera teleskopika na hydraulic!